Grande Vue-Bazley Beach
Bazley Beach, KwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguVanessa
Indlu enamagumbi okulala ama-5 egcwele umoya ogcweleyo kwicala lokuzilungiselela kwindawo yokuchithela iholide ethe cwaka eBazley Beach. Sinikezela, indawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu wokuzilungiselela, iindawo ezinesisa kunye nemibono egqwesileyo yeterrase kulo lonke uLwandlekazi lwaseIndiya ukukunceda uphumle.
Amagumbi okulala amabini anobunewunewu aphindwe kabini onke anombono ophefumlayo wolwandle kunye negumbi lesi-5 elinendawo yokuhlala kunye ne-2 singles. Ilala abantu abadala abayi-10 kunye nabantwana aba-2 ngokukhululeka, onke amagumbi okulala abekwe kakuhle, aneekhabhathi zomyili kunye nelinen emhlophe qhwa.
Amagumbi aphindwe kabini aneeyunithi ezahlukeneyo zokupholisa umoya, ukufikelela ngasese kwi-terrace kunye nemibono yolwandle engaphazamisekiyo ye-180. Kukho amagumbi okuhlambela amathathu afakwe ngokupheleleyo kunye ne-W / C eyongezelelweyo kwindawo yokuhlala. Sinikezela ngetowels zokuhlamba..
Indawo enkulu yokuhlala enendawo yokuhlala etofotofo kunye negumbi lokutyela kunye nekhitshi elicwangcisiweyo elivulekileyo lidala imvakalelo yokuhamba kunye nendawo eneminyango egcweleyo evuleleka kwiteyiji engaphandle. I-terrace yeyona nto ibalaseleyo yekhaya lethu leeholide. Ibonelela ngokufihlakeleyo, indawo yokuhlala, kunye nendawo echongiweyo yebarbeque/ibraai kwicala elingasezantsi ukunqanda nayiphi na imimoya ebhudlayo.
Indlu yaselwandle yenye yezindlu ezi-5 ezivalwe ngodonga lomda kunye nokufikelela kwesango lombane ekwabelwana ngalo ukubonelela ngokulula, ubumfihlo kunye nokhuseleko. Indlu yethu ikwanayo nenkqubo ye-alam elawulwa kude yokhuseleko olongezelelweyo.
Iindawo zokuzityisa wena:
Indlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Izixhobo ziquka i-oveni eyakhelwe-ngaphakathi kunye ne-hob ene-extractor fan, i-microwave, i-dishwasher, umatshini wokuhlamba, i-tumble dryer kunye ne-2 x ifriji / ifriji. Kukho i-cutlery eyaneleyo kunye nezitya ezilungiselelwe abantu abali-12 abanazo zonke izinto zokupheka onokuzifuna. Ikhawuntara enkulu yegranite ephezulu yenza isiqithi kwaye yeyona ndawo iphambili yesicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala. Ifanelekile ukulungiselela ukutya, ukutya kunye nokuzonwabisa.
Indlu inokufikelela ngasese kunxweme oluphambili lweBazley elunxwemeni oluzolileyo nolungenakonakala, olulungele ukuloba, ukuntywila, ukuqubha, ukuhlamba ilanga kunye nokuhlola amachibi amatye. Le ndlu ikwabandakanya nephepha-mvume lokufikelela kulwandle oluthintelweyo olukufutshane oluzidla ngokukhusela imimoya. Kubantu abathanda igalufa, iklabhu yelizwe laseSelborne ikwiikhilomitha ezimbalwa ezantsi kwendlela kunye neklabhu yegalufa yaseMdoni ebukekayo.
I am a devoted granny to 8 adorable grandchildren and love being social. I enjoy being very active, especially mountain biking, daily walks on the beach, aqua aerobics and doing the Park Run on a Saturday morning.
UVanessa Wuth, umamkeli wakho uhlala kwiGated Estate, ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ucelayo uya kuzama ngako konke anako ukukunceda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bazley Beach